Allgedo.com » 2012 » October » 13
Home » Archive Daily October 13th, 2012
Banaanbax lagu Taageerayay Ra’isalwasaaraha Cusub oo ka dhacay Magaalada Garbahaarey iyo Qaar ka mid ah Degmooyinka Gobolka Gedo
Banaanbaxyo lagu taageerayay Ra’isalwasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr.Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid)ayaa maanta waxaa ay ka kala dhaceen degmooyinka Garbahaarey, Luuq, Dolow, Ceelwaaq iyo Baladxaawo, iyadoo dadweynmahii banaanbaxayeyna ay la kala hadleen Mas’uuliyiin ka kala tirsan Maamulada Gobolka Gedo iyo Maamulada Degmooyinka Gobolka. Banaanbaxani taageerada ah oo kii ugu balaarnaa ayaa...
Al-Shabaab oo caawa baneeyay qeybo kamid ah gobolka Sh/Hoose iyo Ciidamada Huwanta oo la wareegay
Wararka ka imaanaya qeybo kamid ah gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in caawa ay isaga baxeen Xoogagii Shabaab ee ka talinayay. Dadka deegaanka ayaa goor hore oo galabta ah inoo sheegay in ciidamadii Shabaab ay isaga baxeen magaaladda Yaaqbari weyne iyadoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhacay. Waxyar kadib ayaa magaaladda Yaaqbari weyne waxaa gaaray ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Amisom oo markii hore...
Wasaaradihii ugu muhiimsanaa ee Xukumada Dr Saacid oo la diyaariyay lana horgeyn doono Barlamaanka
Xili dhawaan la filayo in xildhibaanada uu hortag Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa hada waxaa la helayaa war ah in la diyaariyay inta badan xubnihii xukumada cusub. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Ra’isul Wasaare Dr Saacid uu diyaariyay ilaa 16 Wasiir oo kamid noqonaya xukumadiisa cusub ee dhawaan la filayay. Xubnaha Wasiirada ah ee diyaarsan ayaa kusugan Magaaladda Muqdisho, waxaana...
Ergayga Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya Agustine Mahiga ayaa mar qura shib yiri oo warkiisana la waayay, kadib markii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doorashada ku guuleystay 10 bishii Sebtember ina dhaaftay. Mahiga ayaa waxaa uu kal hore ahaa ninka majaraha u hayay Dawladdii musuqmaasuqa ku dhisnayd ee ay horboodi jireen labada Shariif ee nahaabiinta ah! kuwaasoo ku socday hadba wixii uu...
Kulan ka dhacay Kismaayo oo looga hadlay amaanka iyo wada shaqeyn dhexmara dowlada iyo Raaskambooni
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay kulan balaaran oo looga hadlay xaaladda amaan ee Magaaladda iyo guud ahaan Jubooyinka. Kulankan ayaa waxaa goob joog ahaa saraakiisha dowlada iyo kuwa Raaskambooni ee dhawaan wax ka qabtay magaaladaas Kismaayo. Markii kulanka uu soo dhamaaday ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa saxaafada uga warbixiyay...
DHAGA BADAN: Howlgalkeena kuma ekaan doona Kismaayo
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Gen. C/Kariim Dhaga badan ayaa ku hanjabay in ay Al-Shabaab ka saari doonaan dhamaan goboladda dalka. Isagoo saxaafada kula hadlayay degmada Walaweyn ee gobolka Sh/Hoose ayaa waxaa uu sheegay in ay ka go’an tahay in Shabaab ay ka saaraan degmooyinka hada ay ku xoogan yihiin ee kuyaal Jubooyinka, Labada Shabelle, Bay, Bakool Gedo iyo bartamaha Soomaaliya. “Howlgalkeena...
Ciidamada Huwanta ah oo udhaqaaqay Magaaladda Jowhar
Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa udhaqaaqay Magaaladda Jowhar ee gobolka Sh/Dhexe halkaas oo ay ku xoogan yihiin Shabaab. Ciidamadan oo wata gaadiidkii dagaalka ayaa dhaafay deegaanka Qalimow oo ku dhow magaaladda Jowhar. Saraakiil katirsan ciidamada dowlada ayaa inoo xaqiijiyay in ay ku dhawaadeen Magaaladda Jowhar saacadaha soo aadana ay gaari doonaan. ‘Waxaa ay ciidamada sii...
Tirakoobka Shacabka oo si xowli ah uga soconaya Muqdisho iyo dowlada oo kahadashay
Waxaa degmooyinka gobolka Banaadir ka soconaya tirakoobka dadka degan Magaaladda Caasimadda ah ee Muqdisho. Dadka iyo Guryaha ayaa latira koobayaa si loo ogaado xadiga dadka degan Magaaladda Caasimadda ah, taas oo sidoo kale ka qeyb qaadanaysa sugida amaanka. Isagoo lahadlayay saxaafadda ayaa Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf waxaa uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo tirakoobka...
Magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Dalka Somalia ayaa Saddaxdii sano ee ugu danbeysay ka bogsaneysay Colaadihii dhaliyay Bur-burka waxaana iminka dabiibaya Dowladaha Caalamka oo dib usoo hagaajinaaya Bilicda Magaalada Muqdisho haba ugu horeysee Dowladda Turkiga oo abaal u gashay dalka iyo dadka soomaaliyeed Magaalada Muqdisho ku dhawaad 22-Sanno waxaa la dagay Colaad aan la tilmaami karin halka ay salka...
Qaraxyo ka dhacay Saldhig ciidan oo Afgooye kuyaal iyo Howlgalo soconaya
Wararka ka imaanaya Magaaladda Afgooye ee gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in xalay laga maqlay qarax xoogan. Qaraxan ayaa ahaa Bambooyin lagu tuuray saldhig ciidan oo kuyaal bartamaha magaaladda. Dad goob joogayaal ah ayaa AOL usheegay in ilaa labo qarax lagu weeraray ciidamo katirsan dowlada oo kusugnaa saldhiga degmada Afgooye waxaana qaraxyadaas ay sababeen qasaarooyin kala duwan. Labo kamid ah ciidamada...